Ọ bụrụ na ị bụ onye na-agụ akwụkwọ nke ọma Martech Zone, ị maara na enwere m mmetụta dị iche iche ahịa ahịa. My ele nke influencer ahịa abụghị na ọ naghị arụ ọrụ… ọ bụ na ọ dị mkpa ka emejuputa ya na soro ya nke ọma. Enwere ihe ole na ole kpatara:
Omume ịzụrụ - Ndị na-emetụta ya nwere ike wulite mmata ika, mana ọ bụchaghị kwenye onye ọbịa ka ọ zụta ihe n'ezie. Nke ahụ bụ nsogbu siri ike… ebe enwere ike ọ gaghị akwụghachi onye na-eme ihe ike nke ọma ma ọ bụ ahịa ngwaahịa ahụ anọghị ebe ụlọ ọrụ chọrọ itinyekwu ego.
ọkụ – N'ịbụ ndị na-arụ ọrụ na ụdị n'oge gara aga, Amaara m na ọ na-ewe ọnwa mgbe ụfọdụ iji kpoo obodo m ruo ngwọta. Mgbe ụlọ ọrụ anaghị ahụ nsonaazụ ozugbo, ha na-agba ọsọ. M nwere oké results na ụdị na-arụ ọrụ na m otu afọ ma ọ bụ karịa… ma ndị na dị nnọọ chọrọ ime a 1 na mere ule mgbe arụ ọrụ si.
Ndepụta - Na njem ndị ahịa ọ bụla, enwere njedebe dị iche iche… na ọ bụghị ha niile ka enwere ike ịdeghachi azụ na ọrụ m dị ka onye na-eme ihe. Enwere m ike ikwu maka ika na ngosi ma ọ bụ pọdkastị na ndị na-ege m agaghị eji URL omenala, koodu mbelata ego, ma ọ bụ tinye ebe ha nụrụ gbasara akara ahụ. Maka ụlọ ọrụ ahụ, ọ dị ka emebeghị m. Ma, ọ na-ewute m na enwetaghị m otuto.
Ecommerce bụ ụlọ ọrụ dị ịtụnanya ịrụ ọrụ na ya n'ihi na njem maka ngwaahịa n'ịntanetị na-abụkarị ọwara mara mma. Nke a bụkwa eziokwu na ịre ahịa influencer na ecommerce kwa. Ọ bụ ya mere e nwere YouTubers na-eme ọtụtụ nde dollar kwa afọ na influencer ahịa ohere… ha dobe a njikọ na show nkọwa na ọtụtụ puku ndị na-eso ụzọ ha nwere ike tinye ngwaahịa n'ime ha ụgbọ ibu. Na ọ bụla click na ntughari trackable, ma ika na influencer bụ nnọọ obi ụtọ na-arụ ọrụ na ibe na-akpali ọzọ mmata na ahịa.
Ọrịa ọjọọ ahụ ebugharịla ọtụtụ ndụ anyị n'ịntanetị, site na otu anyị si akparịta ụka ruo n'ụzọ anyị si azụ ahịa. N'ezie, IBM kọrọ n'oge na-adịbeghị anya na ọrịa na-efe efe emeela ka mgbanwe mgbanwe na e-azụmahịa dị ngwa ngwa 5 afọ.
Taa, obodo dijitalụ na-achị ụwa nke azụmahịa na ụdị na-amalite ịghọta uru na-arịwanye elu nke itinye ego na ndị na-eme ihe - ndị na-ahụ maka mgbasa ozi ọha na eze bụ ndị nwetara ntụkwasị obi nke ndị na-ege ha ntị na ike ịmegharị echiche ha na ịzụta mkpebi.
Gịnị kpatara Ahịa Influencer?
Enwere uru dị ukwuu na iso ndị na-eme ihe na-arụkọ ọrụ na ndị nnọchianya na-ewu ụlọ:
Nkwado ezigbo - Mgbe onye nnọchi anya n'ezie hụrụ akara n'anya, ha ga-ebipute banyere ika ahụ ọtụtụ oge - mgbe ụfọdụ na-enweghị akwụkwọ nkwado # nkwado - na-enye akaebe mmekọrịta.
Ndị na-ege ntị dị iche iche – Onye nnọchi anya onye ọ bụla nwere mmetụta na obodo nke ha. Ha na-anọchi anya onye ọ bụla n'ime ndị na-azụ ahịa lekwasịrị anya na ika ma na-ekwu maka ika ahụ n'ụzọ nwere ike ịgbanwe.
Mmepụta Afọ - N'ihi na ndị na-eme ihe na-emepụta ọdịnaya nke ha, ị nwere ike ịbawanye ọdịnaya ọdịnaya nke ọwa gị dịka ịchọrọ… n'ezie lekwasịrị anya na ndị na-eme ihe na-anọchi anya akara gị.
omume Management - Ndị na-emetụta ya na-etinye ego buru ibu na ihe omume ndụ na mgbasa ozi, na-enye ohere pụrụ iche na nke dị nso iji gosi ndị na-ege ha ntị ika gị.
Ọnụ ego dị ala-kwa-Nweta - Ndị nnọchi anya ika na-eme ka ụdị ahịa nwee ike nwetakwuo ntakịrị, n'ihi na ụdị nwere ike igbachi ọnụego ya na ndị nnọchi anya n'ihu maka mgbanwe maka mmekọ ogologo oge.
Njikere – Ndị nnọchi anya ika na-ekwenyekarị ịnọ naanị otu ụdị n'etiti ụlọ ọrụ ahụ, na-enye ụdịdị ohere ijide ohere mgbasa ozi na ndepụta ha.
Aspire: Marketing Influencer zutere Ecommerce
Aspire bụ ikpo okwu ịre ahịa influencer wuru maka ecommerce. Ikpo okwu na-enye:
Nchọpụta mmetụta - ike ịchọ na jikọọ na ihe karịrị nde 6 mmetụta, ndị na-akwado ika, ndị ọkachamara ụlọ ọrụ na ndị ọzọ site na ịpị bọtịnụ.
Njikwa Mmekọrịta - jikwaa mkpọsa mmetụta nke ọma, mmemme mmekọ, mkpụrụ ngwaahịa, na ndị ọzọ - na-enweghị oke.
Mbupu & nsuso akpaaka - ụgbọ mmiri na-emetụta ngwaahịa ha chọrọ yana ọbụna kesaa ozi nsochi - na-ewepụ usoro ntuziaka niile n'aka gị.
n'ọkwá - Nnukwu mepụta koodu mgbasa ozi Shopify pụrụ iche na njikọ njikọ maka ndị na-eme ihe ọ bụla, na-enweghị ịhapụ ikpo okwu.
ROI nwere ike itule - jiri ọpịpị tụọ nloghachi na mmemme influencer gị, iji koodu nkwalite, ma ọ bụ ọbụna iru. Kwuo akụkọ zuru oke nke otu ndị na-eme ihe na-eme ka uto dị mkpụmkpụ na ogologo oge.
Mmepụta Ihe - Weta mmetụ mmadụ na ọwa ịre ahịa gị nwere ọdịnaya mmetụta nke na-adị ngwa imepụta, dị ọnụ ala na iche iche. Mgbe ahụ kwalite mgbasa ozi iji wuo nnukwu mkpọtụ.
Shopify Mwekota - Leverage Aspire's Shopify ntinye maka ahụmịhe ahaziri iche ị nwere ike ibili ma na-agba ọsọ na nkeji, gụnyere ikike izipu na soro ngwaahịa ma ọ bụ nkwalite.
Detuo ihe ngosi Aspire
Tags: ndị nnọchiteanyaeri kwa nnwetaahịa ahịausoro ihe eji ere ahịainfluencer ahịa azummmetụta ahịa nsusoNjikwa mmekọrịta mmetụtammetụta mmetụtaKoodu promoụlọ ahịashopify mwekota